जिन्सको पाइन्ट किन्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस्
अहिलेको जेनरेसनका लागि जिन्सको पाइन्ट फेसन मात्र हैन, आवश्यकता नै बनिसकेको छ । अहिलेका युवाहरु कमै होलान्, जो जिन्सका कपडा लगाउँदैनन् ।
यसको रफ–टफ लुक्स र प्रयोगका कारण जिन्स हाम्रा लागि जरुरी बनिसकेको छ भने किन हामी यसको प्रयोगबारे अझ बढी जानकार नुहने ? यदि तपाईं जिन्स किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
ट्रेन्डिङ के छ ?
सधैं एकै प्रकारको जिन्स नकिन्नुहोस् । धेरैजसो मानिसहरु एकै प्रकारको जिन्स लगाउने गर्छन् । तर जिन्समा केही नयाँ ट्राइ गर्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तै साइज, कलर, स्टाइल आदी विषयमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । तपाईंले यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि बजारमा कस्तो जिन्सको प्रयोग बढ्दो छ ।
उद्देश्य निश्चित गर्नुहोस्
जिन्स खरिद गर्नुभन्दा पहिला तपाईंले यो कुराको ध्यान राख्नु जरुरी हुन्छ कि तपाईं के उद्देश्यका लागि जिन्स किन्दै हुनुहुन्छ ? अफिसमा क्याजुअल थीमका लागि अथवा साथीहरुसँग घुम्न जानका लागि ? यदि तपाईं अफिसमा लगाउनका लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको जिन्स सामान्य र क्लासी हुनुपर्छ । यदि तपाईं साथीहरुसँग घुम्न जानका लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं न्यारो–फिट जिन्स पनि किन्न सक्नुहुन्छ ।
डिजाइनमा ध्यान दिनुहोस्
समयसँगै कपडाका कैयौं स्टाइल ट्रेन्ड बन्न जान्छन् । तर केही यस्ता स्टाइल्स हुन्छन् जसलाई तपाईंले इग्नोर गर्नु नै राम्रो हुन्छ । जस्तै तपाईंले किन्ने जिन्सको ब्याक प्याकेट (पछाडिको खल्ती) धेरै डिजाइन गरिएको नहोस्, ड्रमाटिक वाश प्याटर्न नहोस्, साथै ओभर डिजाइन गरिएको पनि नहोस् । लुक्स र डिजाइन सामान्य होस् ।
फ्याब्रिकमा ध्यान दिनुहोस्
जिन्स खरिद गर्नुभन्दा पहिले कपडालाई राम्रोसँग छोएर हेर्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईंलाई फ्याब्रिकको क्वालिटी (गुणस्तर) थाहा हुन्छ । साथै फ्याब्रिकको क्वालिटी पत्ता लगाउन धेरै हतार गर्नु पनि हुँदैन । जिन्स किन्नु भन्दा पहिले उत्पादन भएको देश र उसको ब्रान्डबारे पनि जानकारी लिनुहोस् । जर्मनीमा उत्पादन भएको जिन्सको क्वालिटी अन्य देशमा उत्पादन भएकोभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
कटन मिक्स होस्
जिन्स खरिद गर्ने बेला यो ध्यान दिनुहोस् कि त्यसमा ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म कटन मिम्स होस् । यस्तो जिन्सको फिटिङ धेरै राम्रो हुन्छ । सस्तोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले धेरै ब्रान्डले कुनै अरु फ्याब्रिकलाई जिन्ससँग मिक्स गरिदिन्छन् । जिन्समा लिनेन मिक्स गरिएको छ भने पनि राम्रो फिटिङ दिन्छ ।